रमेश सायन, ( )
म आफू एउटा कथा हुँ । भेटेका हरेक मान्छे पात्र हुन् । जसको बजारमा माग छैन । पाठक छैनन् र दोस्रो संस्करण निस्कने छैन । बाँच्ने शैली बेरागात्मक छ । बिगत सम्झने उत्ति साह्रो फुर्सदै छैन । मानौ ती पात्रहरु हावाले उडाउँदै गरेको कपासको छायाँ हुन् जो अब दोहोरिएर म बाँचेको बाटो फर्कने छैनन् । एकाध पात्रहरुले कतै न कतै पछ्याई रहेकाछन् । जीवनसँग कतै न कतै आएर ठोक्किई रहेकाछन् । र, ती नै पात्रहरुलाई कहिलेकाँही फल्यास ब्याकमा उभ्याएर उनीहरुसँगै बेराग बगिरहन्छु ।
दुई वर्ष पहिले जीवनसँग थाकेका, प्रगतिमा ओरालीँदै गरेका एक जना मित्र पूजा पाठ गर्न र देवालय भाकल गर्न थालेका रहेछन् । जसले मलाई उनले चिनेका एक ज्योतिष कहाँ साथीको नाताले लिएर गएका थिए । ती मित्रलाई “शनिको दसा छ । ग्रह दसाको पाठपूजा गर्नु । शनिबार वर पिपलमा पानी चढाउनु” भनेको थियो । मलाई चाहिँ “जीवन सामान्य छ । कुनै मोडमा तँ जोगी हुन्छस्” भनेको थियो । उस दिन देखी आजसम्म मेरो जीवन उही गतिमा धकेलिरहेको छ । कतै संगीतको राग जस्तो शैली मिलेको तरंग छैन । भविश्यसँग चिन्ता छैन । आशा गर्ने सपना पनि छैन । त्यसैले ज्योतिषले जे भने पनि मेरो जीवनको कुनै कुनामा चिन्ताको दल सरेन । रु.पचास ज्याला दिए पछि म उसको दैलोबाट बलेसीमा झरेको थिएँ ।
तीन दिन अगाडि पशुपति जान मन लाग्यो । कारण केहि थिएन । मंसिर मैनाको घाम,पशुपतिको भिडभाडमा कसैलाई भाग नलगाई सिंगैै तापिरहें जसरी तापिरहेका थिए,स्वर्ग जाने बाटो खोज्न आएका सन्यासी योगीहरु ।
पैतालासम्म खसेको लट्टे दारी, उस्तै आकारको कपाल,पुरै खरानी दलेको खाई लाग्दो ज्यान । यो भन्दा अगाडी त्यत्तिको बलियो योगी कहिलै देखेको थिइन जसले आफ्नो छोप्नु पर्ने एक अंश मात्र छोपेको थियो । उसैको छेउमा उभिएँ, नाम र घर सोधँे । योगीहरुसँग सपना हुदैन, सपना र रहर नभएको मान्छे रिसाउँदैन भन्ने लागेको थियो तर त्यो योगीले मलाई रिसाएर भन्यो । “योगीको नाम, घर, थर, र जात सोध्ने तँ कोहोस् ।” म उठेर हिड्न खोजँे । उति नै खेर कुनै विदेशीलाई टेक वीथ मि पिक्चर, वान पिक्चर टु हन्ड्ररेड भनिरहेको थियो । सम्झँे, भरे उसकी स्वास्नीले उसको खल्तिबाट सन्ध्याकालीन आय बिवरण खोज्नेछे वा दिन भरि खैरेसँग फोटो खिचाउँदा थाकेको शरीर ठमेलको कुनै मसाज सेन्टरको गेटमा बिसाउने छ ।
उसको बाँच्ने शैली हो, जसरी बाँचोस् । म अलि पर सरें र रमितेहरुमा थपिएँ ।
पारी लासहरुको लाईन छ । प्राय जसो आधा डढिसकेका छन् । लासहरुको उमेर फरक छ । नरबहादुरको सेकुवा पसलबाट आउने गन्ध र लासहरुबाट आउने गन्ध एक समानान्तर रेखा जस्तो लाग्छ ।
सबै लासहरुबाट उडेको धुवा र फैलिएको गन्ध एकै रङ्ग, उस्तै आकार र गतिमा हावाले बोकेर दगुरिरहेको छ । मेरो आँखामा धुवाँको कालो रङ्ग,नाकमा लासको गन्ध र मेरो मथिङ्गलमा म भन्दा पञ्चहत्तर वर्ष जेठी र बीस वर्ष पहिलेको भोल्टि सर्किनीको अनुहार पौडिरहेको छ । मेरो आँखामा उनका भिराला खेतका गह्रा जस्ता गाला र तुषारोको बिहान जस्तो कपाल तैरिरहेको छ । जसलाई मेरा बा र हजुरबाले कहिल्लै हाम्रो मजेरीको रङ्ग उनको आँखाको नानीमा पर्न दिएनन् । घरको दलिन उनका औँलाका चक्रले छाम्न दिएनन् । उनी मलाई कान्छ बाजे भन्थिन् । म उनलाई “भोल्टि र तिमी” सम्म भनेर सम्बेधन गर्थेँ जस्तो मलाई सिकाइएको थियो । हाम्रो बेसीमा उनी असार रोपिन्थिन् र मंसिरमा बिस्कुन सुक्थिन् । हरेक साँझ उनी आफ्नो अगेनोमा बल्थिन कि बल्दिन थिईन मलाई राम्ररी थाहा भएन । तर उनी जीवन बोकेर हाम्रो घरमा बेसाहा किन्न आउनेहरुलाई थांग्रोबाट मकैका झुत्ता ओरालेर कुनै रहर नबोकी बाँचेकी हुन्थिन् ।
मैले आँखाको बराबर बिन्दुमा मेरा हजुरबा र भोल्टि सर्किनीको लास जलि रहेको सम्झिएँ । जो यिनै लासहरु झै बराबर गनाई रहेका थिए । अन्तमा दुवै स्वादहीन खरानी भएर सुनकोसिमा बगेका थिए ।
म मेरो हजुरबाको मथिङ्गलबाट उम्किएर डिलमा उभिएको छु जहाँ सबैले ओडेको क्षितिज एकै आयतनमा फैलिएको छ । धेरै बेर सम्म उनैलाई सम्झि रहें ।
घाट भित्रँदै गरेको एउटा नयाँ लासले ध्यान फेरि लासहरुको लाममा तान्यो । त्यो लासको उमेर मेरो बराबरको हुनु पर्छ । मलामीहरु मेरो एम. ए. कक्षाका संख्या जति छन् । सबै तन्देरी छन् । लासको उमेर र मलामीको उमेर प्राय मिल्छ । रुनेकाहरुको संख्या धेरै छैन । एक जना ठूलो स्वरमा धित मर्ने गरि रुहिरहेको छ । बुझदा उसको बाबु रहेछ । टी.यू. मा एम.एसी. पढ्दा पढ्दै साईनाईट खाएर आत्महत्या गरेछ । ठिक्कै छ उसको मृत्यू उसको अधिकार, बाँच्न मन लागेन म¥यो । के भयो त ? कसैले कायर भनेर उसको जीवनको स्तर घट्ने छैन अव । आफ्नो जीवनयुद्धमा सहिद भयो । सकियो । आत्महत्या गर्नु कायर हैन बहादुरी हो । मनले भन्यो ।
तर एक पल्ट मर्नु छ किन साईनाईट खाएछ मनमा उसको मृत्युको पछुतो फैैलियो । बिचराले मर्नुको आनन्द लिन पाएन । मर्नै पर्ने भए बिस्तारै घाँटिमा ब्लेडले सानो नसा काटेर मृत्युको अनुभब लिईलिई मर्नु राम्रो हो ।
बाग्मती अल्छि मानि मानि बगेको छ । पानीको धर्म बग्नु हो । धर्म निभाई रहेको छ । आज नबग्नु पर्ने भए लेदो त छँदै थियो जमेर बस्ने थियो होला । आफ्नो मृत्यु सक्नु अघि घामले मेरो लामो छाँया धमिलो पानीमा खसाल्यो । आफ्नो उमेर सम्झेँ, २६ वर्ष । कुनै रोग सम्झेँ, केहि छैन । मेरो आयु सम्झँे र पारी लासका लाईन हेरें । अब सरासर बाँच्न पाएँ भने ३५ देखी ४० वर्ष । बीचमा आत्महत्या गर्ने योजना छैन । तर मृत्युको रहर छ । भयानक पिडादायी मृत्यू जसले मलाई दुःखको जस्तै अनेक अनुभब दिईयोस् । चरम भोक र पराकाष्ठा प्यासको पिडा जस्तो अनुभब । हिउँमा खाली खुट्टाको जस्तो पिडा । या कसैले यातनास्वरुप बाघको खोरमा हालिदिने खबर जस्तो, जीवनको अनुभव ।
साँझ पर्न लागेको छ । जोगीहरु पातल्ली सकेकाछन् । बाँदरहरुको चहलपहल घटेको छैन । पशुपतीमा आरती शुरु भएको छ । एक किसिमको संगीत हृदयमा गुन्जियो । यहाँ पनि जीवनको एक आनन्द छ । वैरागीहरुको एक झुन्ड ईश्वरको शरणमा आइपुगेको छ । जहाँ आन्नद छ त्यहाँ ईश्वर हुनुपर्छ । रागमा विलिन यो साँझमा मलाई आनन्द आयो ।
दुई किशोर केटाहरु पानीमा चुम्मकको डल्लो हालेर डलर पैसो तानी रहेका छन् । जीवन जसरी पनि बाँचेर सक्नु छ । बाचिरहेका छन् । एउटाले अनुहार उज्यालो पारेर खल्तिमा हात हाल्यो । लगातार एक दुईका सिक्का भेटेको हुनु पर्छ । रमाउने अनेक तरिका हुन्छन् उ रमायो । मलाई आनन्द आयो । यी किशोरले कहिल्लै आत्महत्या गरेर जीवन सक्दैनन् । यीसँग ठुलो सपना छैन जीवनमा स सानो युद्ध गर्छ र जितिरहन्छ । अघि साईनाईट खाएको लास जलि सकेको छ । मैले जीवनको त्यो सहिदलाई मनमनै सलामी दिए ।
बाटामा फेरि सम्झँे मलाई जोगी हुन्छस् भन्ने ज्योतिषीको भाग्य कस्तो होला । उसको भविष्यमा कस्ता आरु बखडा फले र चिचिलामा झरे । कुन दिन धुरीमा काग करायो र दिनभरि अशुभको डरले कामिरहयो होला । मलाई लाग्छ त्यो ज्योतिषी पनि कहिल्लै आत्महत्या गर्दैन ।
ती मित्र जो जीवनसँग बैरागिएर ज्योतिषीकोमा भविष्य बोकेर पुगेका थिए उनको जीवन प्रति दया लागेर आयो । मलाई गालि गर्ने योगीले दारी र कपालको ब्यापार गरेकोमा आनन्द लागेको छ । कम्तिमा एकै जीवन दुई पाटाबाट अनुभब गर्र्न पाएको छ । उ जोगी र बेश्यालयको ग्राहक एकै पल्ट हुन सक्छ ।
पशुपतीमा बजेको आरतीको राग
एक झुण्ड एक बेराग संगीत बदलियो ।